वृद्धभत्ता ७० वर्ष कटेकाले मात्रै पाउने ! « प्रशासन
वृद्धभत्ता ७० वर्ष कटेकाले मात्रै पाउने !
देउवा सरकारले गरेको ६५ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार तत्कालीन सरकारले कार्यविधि नबनाएको र अहिलेको सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिएपछि निर्णय अलपत्र परेको छ ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका सल्लाहकार डा। रामशरण खरेलले पनि वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६५ वर्ष पुर्‍याउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भनिएको निर्णयबारे मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नभएको बताए ।
तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का एक मन्त्रीले भने ३१ माघमा निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै दुवै मन्त्रालयलाई निर्देशन पठाइएको दाबी गरे । ‘यदि वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएन भने यसबारे संसद्मा कुरा उठाइन्छ,’ उनले भने । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।